के व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा खरीद गर्नु अपराध हो ? — Motivatenews.Com
काठमाडौँ । सर्वशक्तिमान जनताले नेताको कर्म कुकर्ममा औँला ठड्याउनु स्वभाविक हो । यहाँ त सरकारमा रहँदा घरभित्रै रहेर चोरका निम्ति आग्लो खुला गरिदिने जस्तो भूमिका निर्बाह गर्दै बिगतमा भूमाफियालाई पोस्ने निर्णय गर्नेका चम्चाहरू पो सल्बलाए त । महासचिव बिष्णु पौडेलको कमजोरीमा टेकेर उहाँको सबल पक्षमाथि हमला गरी गुटका लागि रोटी सेकेको र सरकारको कदमलाइ खिल्ली उडाएको हेर्दा उदेक लागेर आउँछ ।
सरकारमा छँदा घरको चुकुल खोली चोरलाइ सजिलो पार्ने शैलीमा भूमाफिया पोस्ने, अहिले प्रधानमन्त्रीलाइ महासचिवसँग, पितालाइ पुत्रसँग जोडेर एकै घानमा हाल्ने । गुट मर्मत गर्ने क्या गजबको काइदा है ? सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने गिरोह पत्तालगाउने वर्तमान सरकारको गति र दिशामा अबरोध नपारौं । यो सरकारको किंङमेकर मध्ये एक कमरेड बिष्णु पौडेल नै भएको सत्यलाइ पनि नबिर्सौं ।
तथ्यको आधारमा सत्यको खोजी गरौं यहाँ स्याल हुइयाले सिंह तर्सिदैन, फलेको वृक्ष माथी नै ढुंगा प्रहार हुन्छन, नफलेको वृक्ष तिर कसैको ध्यान हुदैन, कमरेड बिष्णु पौडेल बिरुद्ध कोही किन यसरी खनिएका छन ? सुनिदैछ कार्यालय खडा गरेरै वहाँका विरुद्ध मोर्चावन्दी गरिदैछ रे, के व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा वहाँले खरीद गर्नु अपराध हो ? वहाँले सरकारी जग्गा हडपेको हो ? के बिष्णु पौडेलको राजनीतिक कद घटाउने अस्त्रको रुपमा यसलाई लिन खोजिएको हो ?
बिष्णु पौडेल जमिनबाट उठेको नेता हो, राजनीति र पार्टी जीवनलाई भूईबाटै सिक्दै, छिचोल्दै र नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेको नेता हो, कसैले ट्याप्प टिपेर नेता बनाईदिइ हालौन भनेर बनेको नेता होइन, कसैले दाउपेच नगरे हुन्छ रुख ढलिहाल्छकि भनेर, नवलपरासीमा रहेको आठ कठ्ठा जग्गा वेचेर किनेको जग्गा हो त्यो, कुनै स्रोत नखुलेको जग्गा हो ररु सांसद र मन्त्री हुॅदा सम्पत्ति विवरणमा पेश गरिएको जग्गा हो त्यो, बदनियत राखेको, लुकाएर राखेको सम्पत्ति हो र ?
जग्गाको ईतिहास नखोतल्नु गल्ती हो भने निजी सम्पत्ति विनाका यहाँ कोही छैनन, खरीद गर्दा जग्गाको तात्कालिक स्थिती नै हामी सबैले हेर्छौ, कतिले हेरौला लामो ईतिहास, अझै साथीभाई लाई भर विश्वास गर्ने चलन पनि छ हाम्रो, यस्तै भएको हो यहाँ पनि, एउटा गेडो भेटेपछि त्यसैबाट बिष्णु पौडेलको राजनीतिक जीवन खलबल गर्ने सपना कसैले देख्दैछौ भने त्यसो नगरेको राम्रो, त्यो दिवा सपना कहिलै पूरा हुनैछैन, त्यो तुहिएर जाने छ, एउटा लोकप्रिय र शक्तिशाली नेता लाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन नसकेपछि गैरराजनीतिक अस्त्र प्रहार गर्ने दुस्प्रयास र दुस्साहस हुदैछ, सडयन्त्र हुदैछ, त्यस्ता झुठ र भ्रमका कयौ तुनाबुना बाधिदैछन, यो मुल नेतृत्व माथिको प्रहार र सडयन्त्र बाहेक अरु केही होइन !
*लेखक प्रकाश कुँवर नेकपा निकट विद्यार्थी नेता हुन् ।